ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: May 2010
ပျားဘုရင်မသည် အမျိုးသားများ၏ လိင်ကိစ္စအလေ့အထတွေအကြောင်းပြောပြီးနောက် သူမ ပြောပြတဲ့
လိင်လုပ်သားမိန်းကလေးများရဲ့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းများကို အခုလိုသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။
အမျိုးသားများစွာနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေကြသော ဒို့လို လိင်လုပ်သား အမျိုးသမီးတွေ အဖို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြုအမူတွေကိုသာ မဖြစ်မနေလေ့လာသင်ယူဖြစ်ခဲ့ပြီး တကယ်အလေးထားရမယ့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများကို မေ့လျော့ပေါ့ဆခဲ့မိကြတယ်။ ဒါက လိင်လုပ်သားမိန်းကလေးတိုင်းပါပဲ၊ ကိုယ့်အတွက် ခံစစ်ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ စနစ်တကျမလေ့လာခဲ့ကြဘူး၊ ပေ့ါဆမှုကြောင့် သိထားတဲ့ ကျန်းမာရေးနည်းလမ်းတွေကလည်း လွဲမှားလို့ နေပြန်တယ်။ လိင်လုပ်သားတွေဆိုတော့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြင်းအတွက် တားဆေးနှင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံကိုသိကြပေမယ့် နည်းလမ်းမှန်ကန်မှု မရှိတာကြောင့် အမှားအယွင်းတွေ ဖြစ်ကြရတယ်။ ဥပမာ - ကိုယ်ဝန်မရနိုင်အောင် တားဖို့ တားဆေးတွေ သုံးရမယ်ဆိုတာ သိသော်လည်း.....
မိမိနဲ့ သင့်တော်တဲ့ တားဆေးကို ရွေးချယ်ဖို့လည်း နားမလည်ခဲ့ကြဘူး။
ဘယ်အချိန်မှာ သုံးမှ စိတ်ချရတဲ့ ကာကွယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း မသိကြဘူး။
ကာကွယ်ဖို့ မသိကြ၊ နားမလည်ကြ၊
ဒို့လည်း အဲဒီအထဲမှာ ပါတာပေါ့၊ အလုပ်စလုပ်ပြီး ခြောက်လလောက်ကြာတော့ ဆီးအောင့် ဆီးကျင်တာတွေဖြစ်လာတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ဧည့်သည်လာရင် စိတ်ပါလက်ပါ ဧည့်မခံနိုင်တော့ဘူး။ လိင်ဆက်ဆံစဉ်အချိန်တွေပါ လိင်အင်္ဂါမှာ နာတာတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ရှင်က ဆေးခန်းကို ပို့ပေးတယ်။ ဆရာဝန်မက သွေးစစ်ရမယ်လို့ စပြောပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို အနည်းငယ်ပြောပြတယ်။ ဒီအချိန်ကျမှ ကိုယ်က ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ ဒါတွေကို သတိမထားမိလေခြင်းလို့ နောင်တနဲ့အတူ တစ်ကိုယ်လုံး ပူထူနေတော့တယ်။ ဆရာဝန်မလေးက ကာလသားပိုးရှိ/မရှိ အရင်စစ်ကြည့်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဆရာမလေး ပြောတာတွေကို ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်နဲ့၊ သွေးဖောက်ဖို့ ငြင်းဆန်မိကာ အိမ်ကို ပြန်လာပြီး အခန်းတံခါး ပိတ်လို့ ငိုပွဲဆင်မိပါတော့တယ်။
“ဘယ်သူ့ဆီက ကူးတာလဲ စဉ်းစားစမ်း စဉ်းစားစမ်း၊ ဘယ်တစ်ယောက်ဆီက ကူးမှန်းလည်း မသိ၊ ဟိုခပ်ဝဝ မျက်နှာ အဆီပြန်နေတဲ့ တစ်ယောက်ဆီက များလား၊ ဘီယာတွေ သောက်ထားတဲ့ တစ်ယောက်ဆီကလား၊ ဟိုအဘိုးကြီးများလား၊ ဟိုတနေ့က လာသင်တဲ့ ကောင်လေးဆီကလား အို မဖြစ်နိုင်ပါဘူး သူက ငယ်သေးတာပဲ၊ ဒါဆို မိန်းမကျမ်းကျေတဲ့ ဟိုတစ်ယောက်ဆီကလား၊ အင်း ဘယ်သူများဖြစ်မလဲ။ ကွန်ဒုံးလည်း တစ်ယောက်မှ မသုံးကြဘူး။ ဒါမှ မဟုတ် ဟိုတစ်ရက်က ဖောက်သည် ဆယ့်နှစ်ယောက် ဆက်တိုက်ရတဲ့နေ့ကများလား။ ဟိုတစ်နေ့က ဆရာ(အလုပ်ရှင်)နဲ့လည်း နေဖြစ်သေးတာပဲ။ ဆရာ့ဆီမှာများ ဒီရောဂါတွေ ဖြစ်နေသလား။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ လာလိုက်တဲ့ ဧည့်သည်တွေကို မျက်လုံးထဲမြင်မိရင်း ဆရာမလေး ပြောလိုက်တဲ့ ရောဂါတွေအကြောင်း၊ ရောဂါတွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို ကြားယောင်မိကာ မိမိစိတ်က စေစားရာမှ ရရှိလာသော ဆိုးကျိုးတွေက တမြေ့မြေ့နဲ့ လောင်ကျွမ်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒို့လို ရောဂါတွေကို မသိပဲ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ နောက်ထပ်ရောက်လာမယ့် အမျိုးသားတွေက ဘာကြောင့်များ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ခုံမင်ကြသလဲ၊
ရောဂါများစွာတို့သည် အိမ်သဖွယ် ဖွဲ့တည်နေတဲ့ လိင်လုပ်သား မိန်းကလေးတွေဆီကို ယောကျာ်းလေးများက ကွန်ဒုံးမပါပဲနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖို့ ဘာကြောင့်များ ကြည်ဖြူကြတာလဲ။
ဒီလိုအကြောင်းများစွာတို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် ခံစစ်မကောင်းသော လိင်လုပ်သား မိန်းကလေးများထံမှ မိမိ၏ အခြားသော လိင်ဆက်ဆံဘက်များထံသို့ ထပ်မံ၍ ရောဂါများ ပြန့်ပွါးစေခြင်းကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါများသည် အလွန် လွယ်ကူစွာ ပြန့်ပွါးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ ပျားဘုရင်မလေးက ပြောပြပါတယ်။
နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ သားဆက်ခြားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
ဒီလင့်လေးမှာ သားဆက်ခြားနည်းလမ်းများကို ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
အောက်တွင် ရှိသောလင့်များတွင် ကာလသားရောဂါအကြောင်းများကို အကျယ်တဝင့် ရေးသား ဖော်ပြထား ပါသည်။
Dr Zero's Pages
ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်....(ဇူလှိုင်လတွင် ဘဝဇာတ်ခုံ ရေးသားခြင်းကို ခေတ္တနားပါမည်။)
Posted by Crystal at 12:19 PM 1 comments
ရှေးခေတ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ရုပ်ရှင်ဆိုတာကို ဓာတ်ရှင်လို့သုံးကြတယ်။ အဲဒါလေးကို crystal က သိပ်သဘောကျတာပဲ။
အမှန်တော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ဝါသနာပါလားလို့ မေးရင် စိတ်ဝင်စားတာလေးဆိုရင်တော့ ကြည့်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတိုင်းလည်း မကြည့်ဘူး။ ကိုးရီးယားတိုင်းလည်း မကြည့်ဘူး။ တရုတ်ကားဆိုရင် ပိုမကြည့်ဘူး။ ကုလားဆိုရင် သမိုင်းဝင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကြည့်တယ်။ မြန်မာဇာတ်ကားတွေမှာ အခုခေတ် မင်းသား အငယ်၊ မင်းသမီးအငယ်၊ အဆိုတော် အငယ်လေးတွေ ဘယ်သူကိုမှတောင် မသိတော့ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း အိုလာပြီလေ။
အခုအချိန်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံရေးကလည်း လှုပ်ခတ်နေတော့ အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာများကို စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျမ အမျိုးသားက သူကြည့်နေတဲ့ကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးကို လင့်ပေးလာပါတယ်။ ကြည့်ပါတဲ့ မဆိုးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အီးလိုလည်း စာတန်းထိုးထားတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီး အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ ဒေါင်းယူလိုက်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကိုပဲ ကြည့်လာရာကနေ အခု ဇာတ်လမ်းလေးက TV Series ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုကြည့်ရပါ့မလဲလို့ ကျေးဇူးရှင်ကိုမေးတော့ chatမှာ တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောနေပြီး ကျမကို လှမ်းမဖြေပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ စိတ်လျော့လိုက်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ရောက်ပြန်တော့ you tube ကနေ ရှာကြည့်ရင်း ကျေးဇူးရှင်ပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးထဲက သီချင်းတွေကို ကြည့်မိတော့ စိတ်ဝင်စားပြီး ပိုကြည့်ချင်လာပြန်တယ်။ အမှန်တော့ ဇာတ်လမ်းထဲက မင်းသမီးကို ကျမက သိပ်သဘောကျတာ။ မင်းသားကတော့ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က မကြိုက်တော့ မကြည့်တော့ဘူး စိတ်ကူးထားတာပါ။ ဒီလိုနဲ့ မကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကို ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်က ချိုးဖျက်ပြီး ဇာတ်လမ်းကို ဒေါင်းပါတယ်။ ဒေါင်းပြီးတော့ ဟိုနှိပ် ဒီနှိပ်နဲ့ နောက်ဆုံးတော့ (ယောက်ျားအပြောကို မစောင့်နိုင်တော့သော သကာလဝယ်)ငါဟဲ့ မိန်းမဆိုပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ပြီးနောက် ယင်းဓာတ်ရှင်လေးကို ကြည့်ဖြစ်လေတော့သတည်း။
ဓာတ်ရှင် အတွဲလေးနာမည်က IRIS တဲ့ရှင်။
ဒီလင့်လေးက စီးရီးရဲ့ အပိုင်း (၁ မှ ၁၀)
အပိုင်း (၁၁ မှ ၂၀)
ဘယ်လိုဒေါင်းကြည့်တယ်ဆိုတာကို ဒီလင့်ကလေးမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ကြည့်ဖြစ်တဲ့ကားလေးကတော့ City of Angles
ဒါလေးကိုတော့ you tube မှာလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ် အချိန်ရတဲ့အခါ မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်ပေါ့နော်။
ထို့နောက် အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ အပြင်ထွက်တုန်း အပူရှပ်ကာ ဖျားပါတော့သည်။ အလွန်ဖျားနေသည့်ကြားက သတိမလစ် သွားအောင် မျက်လုံးကို ကြိုးစားပြီး ဖွင့်ထားဖို့အရေး ယင်းဓာတ်ရှင်လေးကို ကြည့်နေပါသည်။ ဓာတ်ရှင်လေးကြည့်ပြီး ရေနွေးတွေသောက်၊ ဆေးတွေသောက်။ ထို့နောက် တရားမှတ်ကာ အိပ်လိုက်ပါ၏။
အပြင်မှာ မိုးတွေ သည်းနေတယ်၊ ကိုယ်ထဲမှာတော့ အပူတွေ ကဲနေတယ်။
ကျေးဇူးရှင်ကို လူကြုံရှိတုန်း ငါးခြောက်ကြော်လေးတွေ ထည့်ပေးဖို့အတွက်
Posted by Crystal at 11:05 AM4comments
အကယ်ဒမီသုမောင်သည် မေလ (၁၆) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ည (၉) နာရီအချိန်ခန့်က ရန်ကုန်မြို့  သုခကမ္ဘာ ဆေးခန်းတွင် ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းရွေ့သွားလေပြီ။ အသက် (၆၀) နှစ်ရှိ အကယ်ဒမီသုမောင်တွင် ဇနီးသည် ဒေါ်အေးအေးမေ (ခေါ်) အေးဘုံနှင့် အတူ သားသမီး (၄) ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးသုမောင်သည် စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဂီတနယ်ပယ် (၃) ခုတွင် တကယ့်ကို အောင်မြင်သော စွယ်စုံအနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် HIV/AIDS ပညာပေးစာပေများကိုလည်းကောင်း၊ သရုပ်ဆောင်ပညာဖြင့်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများ အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာ များစွာလမ်းပြကူညီခဲ့ပေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနုပညာသမားစစ်စစ်များ ရှားပါးချိန်တွင် ယခုလို အနုပညာကြယ်တစ်ပွင့် ကြွေလွင့်မှုအတွက် များစွာစိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းမိပါကြောင်း။
ဘဝအကြောင်းလေးတွေကို များစွာရေးသားခဲ့သော စာပေပညာရှင်ကြီးကို ဘဝရဲ့စာမျက်နှာများဘလော့မှ ကောင်းမွန်ရာဘုံဘဝသို့ရောက်ပါစေကြောင်း ဂါရဝပြုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
Bliss နှင့် Crystal တို့ နှစ်သက်သော အဆိုတော်(ဦး)သုမောင်၏ သီချင်းများ
1986ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ပြသသော ရုပ်ရှင်မှ
သုမောင်နှင့် ခင်သီတာထွန်း သရုပ်ဆောင်မှုအချို့
မြန်မာစာအုပ်ဆိုင် (Myanmar Book Shop နဲ့ မြန်မာအိုင်အက်စ်ပီ ) ၀က်ဆိုက်က ရယူပါတယ်)
၁၉၅၁ - ခုနှစ်၊ မတ်လ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အဖ-စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ ဦးသာဓု၊ အမိ-ဒေါ်ခင်ညိုတို့ က မွေးဖွားသည်။ မွေးချင်း(၄)ယောက်တွင် တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။ အမည်ရင်းမှာ မောင်ဗလဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ် က စိန်ပေါလ်(ယခု အ့ထ့က(၆) ဗိုလ်တစ်ထောင်)တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
၁၉၆၆ - စိန်ပေါလ်ကျောင်းမှ စက်မှုလက်မှု အထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ခဲ့။
၁၉၆၉ - စက်မှုလက်မှုအထက်တန်းကျောင်းမှ ဒီဇယ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့။
ထိုအချိန်မှစ၍ စာပေနယ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယုဝတီဂျာနယ်တွင် စာပြင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရင်း ကဗျာတို၊ စာတိုများရေးသားခဲ့။
၁၉၇၀ - ၀တ်မှုံဂျာနယ်ပါ''သနပ်ခါးရေကျဲကျဲ'' ၀တ္ထုတိုကို ''အုပ်စိုး'' အမည်ဖြင့် ရေးခဲ့(ပထမဆုံးဝတ္ထတိုဖြစ် သည်။)
၁၉၇၄ - ''အချစ်'' အမည်ရှိ လုံးချင်းဝတ္ထုကို စတင်ရေးသား။ သုမောင်သည် စာပေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများသာမက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း ထူးချွန်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ချစ်စံနမူ၊ နှောင့်တမြေ့မြေ့၊ အကြင်တို့လင်မယား-စသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သဖြင့် ''သုမောင်''အမည် ထင်ရှား ခဲ့။
၁၉၇၄ - ခုနှစ်တွင်ပင် ''နှောင်းတမြေ့မြေ့'' ရုပ်ရှင်ကား၌ ဇာတ်ဝင် နောက်ခံတေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော ''ပန်းဦးပန်မယ့် သူ'' သီချင်းကို စတင်သီဆိုခဲ့ရာမှစ၍ တေးဂီတလောကသို့ ရောက်ရှိခဲ့။
၁၉၇၆ - ''ရှင်နေမင်းမှပေးသောစာ'' (ဘာသာပြန်)ထွက်ခဲ့။ ''သိပ်ချစ်တယ်မဟုတ်လား'' လုံးချင်းဝတ္ထုထွက်ခဲ့။
၁၉၇၇ - ''ပင်တိုင်စံမကောင်းပါဘူးကွယ်'' လုံးချင်းဝတ္ထုထွက်ခဲ့။ ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်းတွင် ''ငယ်အိပ်မက်'' ၀တ္ထုတို ရေးခဲ့။
၁၉၇၈ - ''သူ့မောင်မှာ သူ့မောင်မှာ'' ၀တ္ထုရှည်ထွက်ခဲ့။ ''အချစ်ငါမသိ''၊ ''အချစ်ပွင့်ကလေးများ''၊ ''အချစ် သစ်ပင်''၊ ''သာဓုအင်ဆန်း(စုပေါင်း)'' စာအုပ်များထွက်ခဲ့။
၁၉၇၉ - ''အချစ်(၂)''၊ ''အချစ်နှင့်သူ၏ကိုကို''၊ ''အချစ်၏နောက်ဆုံးနေ့များ'' စသော လုံးချင်းဝတ္ထုများထွက်ခဲ့။
၁၉၈၀ - ''အကယ်ဒမီ''၊ ''အချစ်စက်''၊ ''ငါကွ-ခုဆယ်ရာထောင်သောင်းသိန်းသန်းကုဋေ'' စသော လုံးချင်း စာအုပ်များထွက်ခဲ့။
၁၉၈၁ - ''လ''၊ ''စပယ်သုံးကုံး''(စုပေါင်း)၊ ''ထို့ကြောင့် အချစ်ဟုခေါ်ပါသည်''(စုပေါင်း) စာအုပ်များထွက်ခဲ့။
၁၉၈၂ - ''ပန်းစွယ်တော်ရွက်ကလေး''(စုပေါင်း) စာအုပ်ထွက်ခဲ့။
၁၉၈၃ - ''ဍရင်ကောက်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ'' ထွက်။
၁၉၈၄ - ''၀တ္ထုတိုတစ်ပုဒ်ပေးပို့ခြင်း'' (၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်)။ ''သာဓုနှင့်ကျွန်တော်၏ဖခင်များအကြောင်း'' (၀တ္ထု တိုပေါင်းချုပ်)စာအုပ်များထွက်ခဲ့။
၁၉၈၆ - ''အချစ်လား သူဖျားနေတယ်'' စာအုပ်ထွက်။
၁၉၈၇ - ''ကမ္ဘာကြီးတုန်သွားတယ်'' စာအုပ်ထွက်။
၁၉၈၈ - ''ငှက်ကလေးတွေ မောင့်ခေါင်းပေါ်မှာ မင့်ခေါင်းပေါ်မှာ'' စာအုပ်ထွက်။ စာဖတ်သူအကြိုက်-မန္တလေး စာပေဆုကို''အဖေ၏အမေ'' ကိုယ်တွေ့စာတမ်းငယ်ဖြင့် ရရှိခဲ့။
၁၉၈၉ - ''မချစ်တတ်တာမဟုတ်၊ မချစ်ချင်တာပါ'' ၀တ္ထုထွက်။
၁၉၉၀ - ခုနစ်စဉ်အလွမ်း ဇာတ်ကားဖြင့် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုရ။
၁၉၉၅ - နိုဝင်ဘာလတွင် ဟောင်ကောင်၊ မကာအိုနိုင်ငံများရှိ ဆရာဝန်များ ငွေရတုသဘင်မှ ဖိတ်ကြားသဖြင့် မြန်မာ့တေးသီချင်းများ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရခဲ့။
၁၉၉၆ - ''သောတာဆွေ လွမ်းတသ-အမှတ်တရ'' (စုပေါင်း)စာအုပ်ထွက်။
၁၉၉၇ - ''စာရေးဆရာကြီး ဦးရန်အောင် အလွမ်းပြေ(စုပေါင်း)'' စာအုပ်ထွက်။
၁၉၉၉ - ''ကွမ်းစကား'' (၀တ္ထုတိုပေါင်းချုပ်)၊ ''ကြွေ-မိန်းခလေးပုံပြင်နှင့် ဘ၀ရသစာစုများ''၊ ''ပန်းယွန်း အိမ်''(စုပေါင်း)၊ ''မှတ်မှတ်ရရ-ရှုမ၀၀တ္ထုတိုများ'' စာအုပ်များထွက်။
၂၀၀၁ - ''မင်းနဲ့မှချစ်တတ်ပြီ'' ရုပ်ရှင်ကားတွင်သရုပ်ဆောင်။ ''နံနက်စာ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်'' စာအုပ်ထွက်။ သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အိုင်အိုဝါးတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပခဲ့သော ''နိုင်ငံတကာစာရေးဆရာများ စာပေရေးရာ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်''သို့ တက်ရောက်စာတမ်းတင်ခဲ့။
စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်-သုမောင်သည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးပေါင်း (၄၀)ကျော်တွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့။ ရုပ်ရှင်နောက်ခံတေး၊ ရေဒီယိုတေး၊ တိပ်ခွေဆီးရီး-စသည်ဖြင့် တေးသီချင်းပုဒ်ရေပေါင်း(၂၀၀၀)ကျော် သီဆိုခဲ့သည်။
မကွယ်လွန်မီအချိန်များတွင် စာပေကို အလေးထားဆောင်ရွက်ရင်း ဇနီးသည် ဒေါ်အေးအေးမေ(အေးဘုံ)၊ သားသမီးများဖြစ်သော စိုးအိမ်သူ၊ ဖိုးသောကြာ (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)၊ ထိန်ထိန်သာ၊ ထိပ်ထား-ဟူသော သားသမီး(၄)ယောက်နှင့်အတူ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သာဓုရုပ်ရှင်ခြံတွင် နေထိုင်ခဲ့သည်။
အောက်ပါ စာသားများကတော့ - ပညာရွှေတောင် စာအုပ်တိုက် ကနေ ၂ဝဝ၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှာ ပထမ အကြိမ် အဖြစ် ထုတ်ဝေ ခဲ့တဲ့ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး ဦးစီး ဌာန (ရုံးချုပ်) စာတည်း အဖွဲ့က စုဆောင်း ပြုစုတဲ့ 'နှစ်ဆယ် ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ များနှင့် စာစု စာရင်း' စာအုပ်က "သုမောင် (၁၉၅၁)" အကြောင်းကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အမည်ရင်း - မောင်ဗလ
၂။ မိဘအမည် - ဦးသာဓု (စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ) ဒေါ်ခင်ညို
၃။ မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၃၊ ၃၊ ၁၉၅၁
၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - ရန်ကုန်မြို့
၅။ ကလောင် အမည်ခွဲများ - မောင်ညိုအောင်၊ မဟူရာ၊ အုပ်စိုး
စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် သုမောင်သည် ငယ်စဉ်က အင်ဂျင်နီယာ တဦး ဖြစ်လို သဖြင့် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် စိန်ပေါလ် (ယခု အထက ၆ ဗိုလ်တထောင်) မှ စက်မှု လက်မှု အထက်တန်း ကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ ပညာ သင်ကြားခဲ့ရာ ဒီဇယ် အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းကို ၁၉၆၉ ခုနှစ်က အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က စ၍ စာပေနယ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယုဝတီ ဂျာနယ်တွင် စာပြင် အဖြစ် လုပ်ကိုင်ရင်း ကဗျာတို၊ စာတိုများ ရေးသားခဲ့သည်။ ပထမ ဦးဆုံး ဝတ္ထုတို အဖြစ် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဝတ်မှုံ ဂျာနယ်၌ သနပ်ခါးရေကျဲကျဲ အမည်တပ်၍ ရေးသားခဲ့သည်။ ကလောင် အမည် အုပ်စိုး ဖြစ်သည်။
၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလထုတ် ရှုမဝ မဂ္ဂဇင်းတွင် ငယ်အိပ်မက် ဝတ္ထုကို သုမောင် အမည်ခံ၍ ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ရာမှ ယနေ့တိုင် သုမောင် အမည် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အချစ် အမည်ရှိ လုံးချင်း ဝတ္ထုကို စတင် ရေးသားရာမှ လုံးချင်း ဝတ္ထု အများဆုံး ရေးသားသူ ဖြစ်လာသည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စာဖတ်သူ အကြိုက် မန္ဈလေး စာပေဆုကို အဖေ၏ အမေ ကိုယ်တွေ့ စာတမ်းငယ်ဖြင့် ရရှိခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ အိုင်အိုဝါး တက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပခဲ့သော (International Writing paragraph) နိုင်ငံတကာ စာရေးဆရာများ စာပေရေးရာ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း ခံရသဖြင့် သွားရောက်၍ စာတမ်း တင်ခဲ့သည်။
သုမောင်သည် စာပေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း တာဝန်များ သာမက ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်မှု အပိုင်းတွင်လည်း ထူးခ္ဆွန်မှု ရှိသူ တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ တွင် ချစ်စံနမူ၊ နှောင်းတမြေ့မြေ့၊ အကြင်တို့လင်မယား စသော ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် စာပေ ကဲ့သို့ပင် ရုပ်ရှင် တွင်လည်း သုမောင် အမည်သည် ထင်ရှား ခဲ့သည်။
သုမောင်သည် ဇာတ်ကားကြီးပေါင်း ၄ဝကျော် ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်တွင် ရိုက်လက်စ ဇာတ်ကားမှာ မင်းနဲ့ မှချစ်တတ်ပြီ ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ သုမောင်သည် ၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ် အတွက် အကောင်းဆုံး အဓိက အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ဆုကို ခုနှစ်စဉ်အလွမ်း ဇာတ်ကားတွင် ရရှိခဲ့သည်။
စာရေးဆရာ ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် သာမက တေးဂီတ တွင်လည်း ထင်ရှားခဲ့သူ တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် နှောင်းတမြေ့မြေ့ ဇာတ်ကား၌ ဇာတ်ဝင် နောက်ခံ တေးတပုဒ် ဖြစ်သော ပန်းဦးပန်မယ့်သူ သီချင်းကို စတင် သီဆို ခဲ့ရာမှ စ၍ တေးဂီတ လောကသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင် နောက်ခံတေးများ၊ တိပ်ခွေ စီးရီးများ၊ ရေဒီယို တေးများ စသည်ဖြင့် သီဆိုခဲ့ရာ တေးသီချင်း ပုဒ်ရေပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော် သီဆိုပြီး ဖြစ်သည်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ လတွင် ဟောင်ကောင်၊ မကာအို နိုင်ငံများရှိ ဆရာဝန်များ ငွေရတု သဘင်မှ ဖိတ်ကြား သဖြင့် မြန်မာ့ တေးသီချင်းများ သွားရောက် ဖျော်ဖြေခွင့် ရခဲ့သည်။
ယခုအခါ ရုပ်ရှင် ဂီတထက် စာပေကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ရင်း ဇနီးသည် ဒေါ်အေးအေးမေ (အေးဘုံ)၊ သားသမီးများ ဖြစ်သော စိုးအိမ်သူ၊ ဖိုးသောကြာ၊ ထိန်ထိန်သာ၊ ထိပ်သား ဟူသော သားသမီး လေးယောက်နှင့် အတူ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် သာဓု ရုပ်ရှင်ခြံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
သုမောင် ရေးသား ပြုစုခဲ့သော စာအုပ်များ
၁။ ကမ္ဘာကြီး တုန်သွားတယ် - ၁၉၈၇ ခုနှစ်
၂။ ကြူကြူပါအောင် ရယ်သည်
၃။ ကွမ်းစကား (ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်) - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
၄။ ငှက်ကလေးတွေ မောင့်ခေါင်းပေါ်မှာ မင်းခေါင်းပေါ်မှ - ၁၉၈၈ ခုနှစ်
၅။ စာမျက်နှာ (၁၆) (၈/၁၉၇၈)
၆။ ဍရင်ကောက်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - ၁၉၈၃ ခုနှစ်
၇။ နံနက်စာ ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် - ၂ဝဝ၁ ခုနှစ်
၈။ ပင်တိုင်စံ မမောင်းပါဘူးကွယ် - ၁၉၇၇ ခုနှစ်
၉။ မချစ်တတ်တာမဟုတ် မချစ်ချင်တာပါ - ၁၉၈၉ ခုနှစ်
၁ဝ။ ရှင်နေမင်းမှ ပေးသောစာ (ဘာသာပြန်) - ၁၉၇၆ ခုနှစ်
၁၁။ လ - ၁၉၈၁ ခုနှစ်
၁၂။ ဝတ္ထုတိုတပုဒ် ပေးပို့ခြင်း (ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်) - ၁၉၈၄ ခုနှစ်
၁၃။ သာဓုနှင့် က္ဆွန်တော်၏ ဖခင်များအကြောင်း - ၁၉၈၄ ခုနှစ် (ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ်)
၁၄။ သူ့မောင်မှာ သူ့မောင်မှာ - ၁၉၇၈ ခုနှစ်
၁၅။ သိပ်ချစ်တယ် မဟုတ်လား - ၁၉၇၆ ခုနှစ်
၁၆။ အကယ်ဒမီ - ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်
၁၇။ အချစ် - ၁၉၇၄ ခုနှစ်
၁၈။ အချစ် (၂) - ၁၉၇၉ ခုနှစ်
၁၉။ အချစ် ငါမသိ - ၁၉၇၈ ခုနှစ်
၂ဝ။ အချစ်စက် - ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်
၂၁။ အချစ်နှင့် သူ၏ကိုကို - ၁၉၇၉ ခုနှစ်
၂၂။ အချစ်ပွင့်ကလေးများ - ၁၉၇၈ ခုနှစ်
၂၃။ အချစ်လား သူဖျားနေတယ် - ၁၉၈၆ ခုနှစ်
၂၄။ အချစ်သစ်ပင် - ၁၉၇၈ ခုနှစ်
၂၅။ အချစ်၏ နောက်ဆုံးနေ့များ - ၁၉၇၉ ခုနှစ်
၂၇။ အရက်သမား အမှားတရာ (ဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်)
အခြား စာရေး ဆရာများမနှင့် ပူးတွဲ ရေးသားသော ဝတ္ထုများ
၁။ ကွေ့မိန်းကလေး ပုံပြင်နှင့် ဘဝရသစာစုများ - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
၂။ ငါကွ ခုဆယ်ရာထောင်သောင်း သိန်းသန်းကုဋေ - ၁၉၈ဝ ခုနှစ်
၃။ စာရေးဆရာကြီး ဦးရန်အောင် အလွမ်းပြေ - ၁၉၉၇ ခုနှစ်
၄။ စံပယ်သုံးသုံး - ၁၉၈၁ ခုနှစ်
၅။ ထို့ကြောင့် အချစ်ဟု ခေါ်ပါသည် - ၁၉၈၁ ခုနှစ်
၆။ ပန်းစွယ်တော်ရွက်ကလေး - ၁၉၈၂ ခုနှစ်
၇။ ပန်းယွန်းအိမ် - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
၈။ မှတ်မှတ်ရရ ရှုမဝ ဝတ္ထုတိုများ - ၁၉၉၉ ခုနှစ်
၉။ သာဓုအင်ဆန်း (စ်) - ၁၉၇၈ ခုနှစ်
၁ဝ။ သော်တာဆွေ လွမ်းတသ အမှတ်တရ - ၁၉၉၆ ခုနှစ်
မိုးမခ မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Crystal at 9:56 AM0comments
Two glasses of water - After waking up - Helps activate internal organs
One glass of water - 30 minutes before meal - Help digestion
One glass of water - Before takingabath - Helps lower blood pressure
One glass of water - Before sleep - To avoid stroke or heart attack
(from forward gmail)
အထက်ပါအီးမေးလေး ဖတ်ပြီးတဲ့အချိန် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေရှားပါးမှုသတင်းများကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြားသိရတဲ့အတွက် ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဒုက္ခကိုကိုယ်ချင်းစာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါတယ်ရှင်။ တချိန်တုန်းက နွေရာသီဆိုရင် ဂျိုးဖြူက ရေမလာလို့ ရေအခက်အခဲတွေကိုလည်း ငယ်ငယ်က ကြုံဖူးခဲ့ပါတယ်။ ရေတစ်ထမ်းကို ကျပ် (၂၀၀)နဲ့ ရေတစ်စည်ကို ကျပ်(၈၀၀)ပေးရပါတယ်။ သုံးရေနဲ့ သောက်ရေအတွက် အလုအယက်မှာယူနိုင်မှ ကိုယ့်အိမ်အတွက် ရေကို ရပါတယ်။ အခုတော့ အိမ်မှာ အဝီစိတွင်းဆိုတော့ နောက်ပိုင်း ရေမလာတဲ့ ပြဿနာ တော်တော်လေး ကင်းဝေးသွားရတယ်။ မီးလာရင် ရေရပါတယ်။ အခုတော့..... :( ။
ရာသီက ဖောက်ပြန်၊ ရေတွင်း ရေကန် မြစ်ချောင်းတွေ အပြင် အင်းလေးကန်မှာပါ ရေခမ်းခြောက်မှုပြဿနာတွေ ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ တော်တော်လေးကို အဖြစ်ဆိုးနေပြီလို့ ပြောရပါတော့မယ်။ ကျမတော့ ရေအခက်အခဲ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကို မျက်လုံးထဲ မြင်မိနေကာ ရေတစ်ခွက်သောက်မိတိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။
ကျမလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီချင်လို့ ချော-အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် မှ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသော ပိုစ့်လေးကို ခွင့်တောင်းကူးယူကာ ထပ်ဆင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ (ခရစ္စတလ်)
ရေ… ရေ…. ရေ
ရေသန့်လှူမည့်ကျေးရွာ ……… ညောင်လေးပင်ရွာ၊ထော်သွန်ရွာ ၊ လက်ပံရွာ၊ သပြေကန်ရုံးရွာ၊ သပြေမ ရွာ တို့ ရှိကြပြီး အိမ်ခြေ (300) ဝန်းကျင်ခန့်ရှိကြသည်။ အဆိုပါ ရွာများတွင် ပို မို ဒုက္ခ ရောက်နေ သည်ပာု ရွာလူကြီးမှ ရှင်းပြပါသည်။
ပါဝင်လှူဒါန်းမည့် အလှူရှင်များ ဆက်သွယ်ပေးပါရန်………….
၁။ရေသန့် ဗူးကြီး တစ်ဗူး – နှစ်ရာ ကျပ် (ရာဇာ ရေသန့် ပါ)
စုရပ်………………………တိုကျိုဒိုးနပ်ရှေ့ မနက်(9.00) တိတိ
လှူမည့်နေ့စွဲ…………… 16.5.2010 ( Sunday)
လှူမည့်နေရာ………… ညောင်လေးပင်ရွာ၊ထော်သွန်ရွာ ၊ လက်ပံရွာ၊ သပြေကန်ရုံးရွာ၊ သပြေမ
မရွှေရည်(09.5119939)လှူဒါန်းနိုင်သောAချိန်( ရုံးဖွင့်ချိန် – 9:00am ~5:00pm)
ကြည့်ကြပါ.. ရေတစ်ခွက် တစ်ပုံးရဖို့ ကျွန်မတို့တွေသာ နေပူကျဲကျဲအောက်မှာ ဒီလို စောင့်ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုများ နေမလဲရှင်….
ဒီလို အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အသိစိတ်ကလေးများနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကူညီသင့်ကြပါတယ်နော်.. အဆိုးဝါးဆုံးက ရေရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေပါဘဲ.. အခုတောင် တစ်ချို့မြို့နယ်တွေမှာ ၀မ်းရောဂါတွေ ဖြစ်နေကြပြီလို့ ကြားရပါတယ်.. နွေရာသီ ကုန်ဆုံးဖို့ အချိန်တွေ အများကြီး လိုသေးတာမို့ ရှေ့ဆက်ပြီး ရေရှားပါးမှု ပြဿနာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ တာဝန်ရှိသူများ အဖြေရှာသင့်ကြပါတယ်.. ရေလှူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက်ကြမဲ့ အခြားသော ပရဟိတ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေလည်း အများကြီး ရှိပါသေးတယ်.. ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အဖွဲ့အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်…. စေတနာရှင်များကလည်း မိမိတို့နီးစပ်ရာ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေမှာ တတ်နိုင်သမျှလေး အကူအညီ လိုအပ်နေသူများကို ပါဝင် ကူညီလို့ လောကရဲ့ ကောင်းကျိုးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာလေးကနေ ၀ိုင်းဝန်း ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါစို့လို့ ဒီစာလေးနဲ့အတူ တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ရှင်…
အားလုံးဘဲ ဘေးဘယာ ဝေးကွာလို့ ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲကြပါစေရှင်…။
ဓာတ်ပုံများကို http://mmcybermedia.com မှ စိုင်းဖြိုးဝေလျှံရဲ့ volunteer အနေဖြင့်  တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီကြရအောင်လား ပိုစ့်မှ မျှဝေအသုံးပြုပါသည်။ ဓာတ်ပုံပို့ပေးတဲ့ မောင်လေးကိုဖြိုးကို ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်ရှင်.. ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
အပေး အယူ ညီလှသော အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းဖြစ်စေဖို့
အမျိုးသမီးများ သိထား သင့်လို့ စုစည်း ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ သေသေချာချာဖတ်ပါ။ မှတ်ပါ။ စဉ်းစားပါ။ ရွေးချယ်ပါ။ မိန်းမများနဲ့ မကင်းနိုင်သေးတဲ့ အမျိုးသားများလည်း ဖတ်ပါ၊ စဉ်းစားပါ။ ချင့်ချိန်ပါ၊ ကိုယ်ချင်းစာပါ။ ကိုယ်သိထားတာလေးတွေကိုလည်း မိမိလက်ထပ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးကို နားလည်အောင် ရှင်းပြပါ။
ချစ်ခဲ့တုန်းက တူနှစ်ကိုယ် သဘောတူဆုံးဖြတ်သလို အခုလို အိမ်ထောင်ရေးမှာ အရေးပါတဲ့ သန္ဓေတားခြင်း ဆိုင်ရာမှာလည်း နှစ်ဦးသဘောတူ ကြည်ဖြူစွာ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် များစွာအရေးပါလှပေသည်။ မိန်းကလေးတိုင်းလည်း ချစ်သူကို ခေါင်းလေး တချက်ညိမ့် အဖြေပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့ ဘဝက ဒီအတိုင်းမပြီးသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒါတွေလည်း ကြုံတွေ့ရဖို့ စဉ်းစားထားကြပါ။ ကြိုတင်လေ့လာထားကြပါ။ အမျိုးသားများကလည်း ကိုယ့်အမျိုးသမီး ကိုယ်ခန္ဓာထဲကို ဝင်မည့် ဆေးဝါးများ အန္တရာယ်ကို စာနာ နားလည်စိတ်ထားပေးကြပါ။
ဆေးခန်းကို ဇနီးမောင်နှံသွားပါ။ ဆရာဝန်ရှင်းပြတာကို နားထောင်ပါ။ မရှင်းပြရင်လည်း ရှင်းပြခိုင်းပါ။ အသင့်တော်ဆုံး နည်းလမ်းကို ရွေးကြပါ။ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းသည် ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဆိုခဲ့ပါလျှင်လည်း သုံးပါ။ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် မိမိလက်ထပ်ထားသော အမျိုးသမီး ဇနီးမယားနှင့် လိင်ဆက်ဆံလျှင် ကွန်ဒုံးမသုံးလိုကြပေ၊ သို့ပါသောလည်း အမျိုးသားများသည် ကိုယ့်အမျိုးသမီးအပေါ် တကယ် ချစ်မြတ်နိုးပါလျှင် ခံစားမှုအပိုင်းအတွက်ပဲ စိုးရိမ်နေမလား၊ ကိုယ့်အမျိုးသမီးကိုပဲ အန္တရာယ် ဖြစ်စေချင်သလား။ ဒါတွေကို လေးလေးနက်နက် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ ခံစားမှုရှိချင်သပ ဆိုရင်တော့ အမျိုးသမီးကို ကွန်ဒုံးစွပ်ခိုင်းလိုက်ပါ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်၊ ခံစားမှုအတွက် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင် မအောင်မြင်စရာအကြောင်း (လုံးဝ) မရှိပါကြောင်းကို ထင်ရှားအောင် လမ်းပြပေးလိုက်ပါသည်။
အများအားဖြင့် သားဆက်ခြားနည်းအမျိုးမျိုးကို သိထားကြသောလည်း စနစ်တကျ ပိုမိုသိနိုင်အောင် မင်နီများဖြင့် ထင်ရှားအောင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မိမိ၏ဇနီးသည်အပေါ်တွင် မေတ္တာသက်ဝင် ကိုယ်ချင်းစာ မေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေရှင်။
ဒေါက်တာဝင်းသိန်းဆိုဒ်မှာ စာသားများကို ထပ်ဆင့် ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted in Health Education Posted by Dr. Win Thein on Mar 11, 2010
သားဆက် ခြားနည်းများ အကြောင်း ရေးသား ရတဲ့ ရည်ရွယ် ချက်ကတော့ အိမ်ထောင် ရှင်များ သင့်တော်သော သားဆက်ခြား နည်းကို အသုံး ပြုခြင်း အားဖြင့် မိခင်ကော ကလေးပါ ကျန်းမာ စေရန် နှင့် သားသမီး မလိုချင် သေးချိန် တားဆီး ထားရန်၊ အိမ်ထောင် မပြု ရသေး သူများ အတွက် လည်း မလိုလား အပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် ဆောင်မှု ကို ရှောင်ရှား နိုင်စေရန်၊ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် လိင် အကြမ်း ဖက်မှု ခံရသူများ အတွက် အရှက် တကွဲ အကျိုးနဲ မဖြစ်ပေါ် စေရန် ရည်ရွယ် ရေးသား ရပါတယ်...။
သားဆက် ခြားနည်း များကို အဓိက အားဖြင့် (၂) မျိုး ခွဲခြား ထားပါတယ်..
ဟော်မုန်းအသုံးပြု သားဆက်ခြားနည်းများ (Hormonal Methods)
ဟော်မုန်း မသုံးသော သားဆက်ခြားနည်းများ (Non-hormonal Methods)
နေ့စဉ်သောက်သန္ဓေတား စားဆေးလုံးများ (Combined Oral Contraceptives)
ယင်းဆေးလုံး များတွင် Ethinylestradiol 0.03 to 0.05 mg (အီစထရိုဂျင်) နှင့် Levonorgestrel 0.15 mg (ပရိုဂျက်စတင်) ပါဝင် ပါတယ်.. နေ့စဉ် အချိန်မှန် စနစ်တကျ သောက်ပါက ကိုယ်ဝန်ကို ၉၉.၉ % ထိ ကာကွယ် နိုင်စွမ်း ရှိပြီး စတင် သုံးစွဲ သူများ အဖို့ ရာသီ စပေါ်တဲ့ နေ့မှာဘဲ စတင် သုံးစွဲ ရပါမယ်.. နို့တိုက် မိခင်များ သုံးစွဲ မိပါက နို့တွင် နိုက်ထရိုဂျင် နဲ့ ပရိုတိန်း ပါဝင်မှု လျော့ကျ စေ၍ နို့ထွက် နည်းစေပြီး ကလေး ကြီးထွားမှု ကိုလည်း နှောင့်နှေး စေတတ် သဖြင့် ကလေး အသက် ၆ လ ကျော်မှ သုံးစွဲ သင့်ကြောင်း WHO မှ အကြံပြု ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်.. နေ့စဉ် သောက် တားဆေး ကဒ်ကို သုံးစွဲ ခြင်းဖြင့် လစဉ် ရာသီသွေး မှန်မှန် ပေါ်ခြင်း၊ ရာသီ လာစဉ် ကိုက်ခဲမှု သက်သာ စေခြင်း၊ သားသမီး ပြန်လို ချင်ပါက ဆေးရပ်ပြီး မကြာခင် ပြန်ရ နိုင်စေခြင်း၊ သားအိမ် နဲ့ သားဥအိမ် ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား မှု လျော့နည်း စေခြင်း စတဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး များရရှိ စေပါတယ်.. ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး များ အနေဖြင့် ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် တတ်ခြင်း၊ ရင်သား နာကျင် တတ်ခြင်း၊ ကိုယ် အလေးချိန် အနည်းငယ် တိုးတတ်ခြင်း၊ သွေး အနည်းငယ် ဆင်းတတ်ခြင်း တို့ဖြစ် ပေါ်တတ် ပါတယ်.. တရုတ် နိုင်ငံ မှ ထုတ်လုပ် သော တစ်လခံ သန္ဓေတား ဆေးလုံး (China Pink Pill) ဟာ Estrogen ပါဝင်မှု အလွန်များ သဖြင့် သုံးစွဲ ရန် မသင့်တော် ကြောင်း WHO မှ ထုတ်ပြန် ထားပါတယ်..
တစ်လခံ သန္ဓေတားထိုးဆေး (One month Injection)
တစ်လခံ ထိုးဆေး တွင် Estradiol Valerate5mg (အီစထရိုဂျင်) နှင့် Norethisterone Enantate 50 mg (ပရိုဂျက်စတင်) ပါဝင် ပါတယ်.. နေ့စဉ်သောက် တားဆေး ကဲ့သို့ ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး အာနိသင် အကျိုးမှာ လည်း အားလုံး လိုလို တူညီ ပြီး မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲ ပါက ကိုယ်ဝန်ကို ၉၉.၉ % ထိ ကာကွယ် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်.. တစ်လခံ ထိုးဆေး ကို ရာသီ လာတဲ့ နေ့မှ စ၍ (၅) ရက် အတွင်း ထိုးရ ပြီး ၄ပတ် (၂၈ ရက်) တစ်ကြိမ် ထိုးရပါမယ်.. သားသမီး ပြန်လို ချင်ပါက အများ စုမှာ ဆေးရပ်ပြီး ၃ လ အတွင်း ကိုယ်ဝန် ပြန်ရ တတ်ပါတယ်.. ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး များ အနေဖြင့် နေ့စဉ်သောက် တားဆေး ကဲ့သို့ ပျို့ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် တတ်ခြင်း၊ ရင်သား နာကျင် တတ်ခြင်း၊ ကိုယ် အလေးချိန် အနည်းငယ် တိုးတတ်ခြင်း၊ သွေး အနည်းငယ် ဆင်းတတ်ခြင်း တို့ဖြစ် ပေါ်တတ် ပါတယ်.. နေ့စဉ်သောက် ဆေးလုံးနဲ့ တစ်လခံ ထိုးဆေး စတင် သုံးစွဲ လို့ အောက်ပါ လက္ခဏာ တွေ ပြခဲ့ရင် ဆရာဝန် နဲ့ တိုင်ပင် ကုသ ရပါမယ်..
မျက်စိမှုန်ဝါးခြင်း - ကွယ်ခြင်း၊
ပေါင်ခြေသလုံး ကြွက်သား ပြင်းထန်စွာ နာကျင်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်..
၃လခံ သန္ဓေတားထိုးဆေး (3 month Injection)
၃လခံ ထိုးဆေး တွင် Medroxyprogesterone Acetate 150 mg ပါဝင် ပါတယ်.. နေ့စဉ် သောက်ဆေး၊ တစ်လခံ ထိုးဆေး နည်းတူ မှန်ကန် စွာ စနစ် တကျ သုံးစွဲ ပါက ကိုယ်ဝန်ကို ၉၉.၇ % ထိ ကာကွယ် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်.. ရာသီ လာတဲ့ နေ့မှ စ၍ (၅) ရက် အတွင်း ထိုးရ ပြီး (၁၂)ပတ် (၈၄ ရက်) တစ်ကြိမ် ထိုးရ ပါမယ်.. (၃)လ ခံထိုးဆေး ဟာ နို့တိုက် မိခင်များ သုံးစွဲ ပါက နို့ထွက်မှု နှင့် နို့အရည် အသွေး ကို ထိခိုက် ခြင်း မရှိ သဖြင့် ကလေး မီးဖွား ပြီး ၆ ပတ် အကြာ တွင် စတင် သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်.. သုံးစွဲ နေစဉ် ကာလ အတွင်း ရာသီ သွေး လစဉ် မပေါ် ဘဲ ထိန်နေတတ်ပါတယ်..
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေး (Emergency Contraception - EC)
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေး ကို အကာ အကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံ မှုပြုပြီး လျှင်သော်၎င်း၊ လိင်အကြမ်း ဖက်မှု ခံရ လျှင်သော်၎င်း သုံးစွဲ ရမယ့် နည်းလမ်း ဖြစ်ပါတယ်.. အရေးပေါ် သန္ဓေ တားနည်း တွင် သောက်ဆေး နှင့် သားအိမ် တွင်းထည့် ပစ္စည်း (IUD) ဆိုပြီး (၂)မျိုး ရှိပါတယ်.. သောက်ဆေးတွင် (၂) မျိုးရှိ၍ ဟော်မုန်း တစ်မျိုး တည်းပါ (Progestin only EC) သောက်ဆေး နဲ့ ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါ (Estrogen + Progestin EC) သောက်ဆေး တို့ ဖြစ်ပါတယ်.. ဟော်မုန်း တစ်မျိုး တည်းပါ (Progestin only EC) သောက်ဆေး တစ်လုံးတွင် Levonorgestrel 0.75 mg ပါဝင်ပြီး အကာ အကွယ်မဲ့ လိင်ဆက် ဆံမှု ပြုပြီး (၅) ရက် (၁၂၀ နာရီ) အတွင်း စောနိုင် သမျှ စောအောင် သောက်သင့် ပါတယ်.. စောစီးစွာ သောက်သုံး ပါက ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီး ပေးနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း များပြီး နောက်ကျ သောက် ပါက တားဆီး နိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်း တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်း လာပါတယ်.. ဆေး (၂) လုံး ကို တပြိုင်နက် သောက်ရ မှာဖြစ်ပြီး အကယ်၍ သောက်ပြီး (၂) နာရီ အတွင်း အန်ပါက နောက်ထပ် အလားတူ ဆေး ၂ လုံး ကို ထပ်မံ သောက်ရ ပါမယ်.. ပျို့အန်ခြင်း သက်သာ စေရန် အစာစား ပြီးမှ သောက်သင့် ပါတယ်.. ဟော်မုန်း နှစ်မျိုးပါ အရေးပေါ် သောက်ဆေး တစ်လုံး စီတွင် Ethinylestradiol 0.1 mg (အီစထရိုဂျင်) နှင့် Levonorgestrel 0.5 mg (ပရိုဂျက်စတင်) ပါဝင် ပါတယ်.. သုံးစွဲ နည်းမှာ ပထမ တစ်လုံးကို အကာ အကွယ်မဲ့ လိင်ဆက် ဆံမှု ပြုပြီး ၃ ရက် (၇၂ နာရီ) အတွင်း သောက်ရ မှာဖြစ်ပြီး ဒုတိယ တစ်လုံးကို ၁၂ နာရီ ခြားပြီး ထပ်မံ သောက်ရ မှာဖြစ် ပါတယ်.. ဟော်မုန်း တစ်မျိုး တည်းနှင့် နှစ်မျိုးပါ အရေးပေါ် တားဆေး များကို နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ပါက ကိုယ်ဝန် တားဆီး နိုင်မှု ၈၅% နှင့် ၇၅% ၊ ပျို့အန် ခြင်းဟာ ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပါ သောက်ဆေး သုံးပါက ပိုမို ဖြစ်ပွား တတ်သော ကြောင့် ဟော်မုန်း တစ်မျိုးတည်း ပါဆေးကို ရွေးချယ် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်.. မြန်မာ နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း ရှိ 'နေ' ဆေးခန်း (Sun Clinics) များတွင် ဟော်မုန်း တစ်မျိုး တည်းပါ (Progestin only EC) သောက်ဆေး ကို OK EC တံဆိပ် အနေဖြင့် အရည် အသွေးပြည့် ဆေး ရရှိ နိုင်ပါတယ်.. သားအိမ် တွင်းထည့် ပစ္စည်း (IUCD) ကို အကာ အကွယ်မဲ့ လိင်ဆက် ဆံမှု ပြုပြီး ၅ ရက် (၁၂၀ နာရီ) အတွင်း ထည့်ခြင်း ဖြင့် အရေး ပေါ် သန္ဓေ တားနည်း အဖြစ် သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်..
အရေပြားအောက် သန္ဓေတားပစ္စည်း ထည့်ခြင်း (Contraceptive Implant)
အသုံးများ သော ပစ္စည်းမှာ Norplant-2 (Jadelle) ဖြစ်ပြီး (2.5 mm × 43 mm) အရွယ် စီလီကွန် အိတ်လေး (Silicone rods) နှစ်ခု ပါရှိ ပါတယ်.. တစ်ခုစီ တွင် levonorgestrel 75 mg (ပရိုဂျက်စတင်) ပါရှိပြီး လက်မောင်း အရေပြား အောက်ထည့် သွင်း ရပါတယ်.. ထည့်ပြီး ၂၄ နာရီ တွင် အာနိသင် အစွမ်း ရရှိ စေပြီး တစ်ခါ ထည့်ထား လျှင် ၅ နှစ်ထိ အာနိသင် ရှိပါတယ်.. သားသမီး ပြန်လို ချင်တဲ့ အခါ (သို့) အခြား သားဆက် ခြားနည်း ပြောင်းသုံး ချင်တဲ့ အခါ အချိန် မရွေး ပြန်ထုတ် နိုင်ပါတယ်..
သားအိမ် တွင်းထည့် ပစ္စည်း (Intrauterine Contraceptive Device - IUCD @ IUD)
သားအိမ် တွင်းထည့် ပစ္စည်း အမျိုး အစား (၂) မျိုးရှိ ပါတယ်.. တစ်မျိုးမှာ ဟော်မုန်း မပါ ရှိဘဲ သန့်စင် သောကြေးနီ ၀ါယာများ ရစ်ပတ် ထားသော T ပုံသဏ္ဌာန် ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုး မှာ Levonorgestrel (ပရိုဂျက် စတင်) ဟော်မုန်း ပါဝင်သော ပစ္စည်း တို့ဖြစ် ပါတယ်.. အသုံး အများ ဆုံးမှာ ဟော်မုန်း မပါသော ပစ္စည်း ဖြစ်ပြီး တစ်ခါ ထည့်ထား လျှင် ၅ နှစ်ထိ ကာကွယ် နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်.. သားဥ အိမ်ကင်ဆာ ရှိသူများ၊ လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက် ရောဂါ ရှိသူများ (STIs)၊ ပိုးဝင် သားလျှော ခြင်းဖြစ် ပွားသူများ၊ သွေးဆင်း များသူများ၊ သားအိမ် ခေါင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား သူများ၊ သားအိမ် တွင်း ကင်ဆာ ဖြစ်ပွား သူများ၊ သားအိမ် မူမမှန် ဖြစ်နေ သူများ၊ သားအိမ် ၀န်းကျင် တီဘီ ရောဂါ ပျံ့နှံ့ ကူးစက် သူများ ဟာ သားအိမ် တွင်း သန္ဓေတား ပစ္စည်း ထည့်ရန် မသင့်တော် သူများ ဖြစ်ပါတယ်..။ သားအိမ်အတွင်း ပစ္စည်းထည့်ခြင်းသည် ရာသီလာနေစဉ်အချိန်တွင် ထည့်နိုင်လျှင် စိတ်အချရဆုံးဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ဒုံး အသုံးပြုခြင်း (Condom)
ကွန်ဒုံး အသုံး ပြုခြင်းဟာ သားဆက် ခြားခြင်း အတွက် တွင်သာမက လိင်မှ တစ်ဆင့် ကူးစက် တတ်သော ရောဂါ များကို လည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်သော ပစ္စည်း ဖြစ်ပါတယ်.. မှန်ကန် သော နည်းလမ်း ဖြင့် စနစ် တကျ သုံးစွဲ ပါက အထက်ပါ လုပ်ငန်း (၂) မျိုးလုံးကို ထိရောက် စွာ ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်.. ကွန်ဒုံး တွင် အမျိုးသား သုံး ကွန်ဒုံး နှင့် အမျိုးသ မီးသုံး ကွန်ဒုံး ဆိုပြီး (၂) မျိုး ရှိပါတယ်..အခြေ အနေ ပေါ်မူ တည်၍ တစ်ဦးဦး က သုံးစွဲ သင့်ပြီး နှစ်မျိုး စလုံးကို နှစ်ဦး စလုံးက တစ်ပြိုင်နက် မသုံး စွဲသင့်ပါ..
အမျိုသားသုံးကွန်ဒုံးသည် အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါ မာလာချိန်တွင် စွပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး (အသေးစိတ်ကို ကွန်ဒုံးဘူးတွင် စွပ်ပုံ စွပ်နည်းကို ထည့်သွင်းထားပါသည်)၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးသည် လိင်မဆက်ဆံခင် မိနစ် နှစ်ဆယ်ခန့်အလို အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါအတွင်းသို့ စောထည့်ထားပေးခြင်းဖြင့် လိင်အင်္ဂါလမ်းကြောင်း၏နံရံနှင့် ကွန်ဒုံးမှာ တစ်သားတည်းဖြစ်ကာ လိင်ဆက်ဆံရာတွင် အသံမြည်ခြင်းအပြင် အခြားသော စိတ်ခံစားမှုပျက်စေမည့် ကိစ္စများကို ရှောင်ရှားစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ နည်းလမ်း များအပြင် အခြား အသုံးနည်း သော နည်းလမ်းများ ရှိသေး သော်လည်း မဖော်ပြ တော့ပါ.. နည်းလမ်း များ အကြောင်း ကို သိရှိ ရုံသာ ဖြစ်ပြီး အသေး စိတ်ကို မူ ဆရာဝန် နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေး သင့်ပါကြောင်း ရေးသား လိုက်ရ ပါတယ်.. စာဖတ်သူ များ ဘေးဘယာ အပေါင်း မှကင်း ဝေးနိုင် ပါစေ...။
PSI (Myanmar) Guidelines and OK Products
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးများ တစ်လကို နှစ်ကြိမ်ထက် ပိုမိုသုံးစွဲပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်
HIV Information for Myanmar ဆိုဒ်မှာ ကူးယူပါသည်။
by Seagull on Sat 08 May 2010 18:18 MMT | Permanent Link
အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးများကို တစ်လလျှင်နှစ်ကြိမ်ထက် ပိုသုံးပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း၊ ဆေးများတွင် အမျိုးသမီးဟော်မုန်းဓာတ် လွန်ကဲစွာပါဝင်ပြီး၊ ဆေးများတွင်ပါဝင်သော ဟော်မုန်းဓာတ်သည် နေ့စဉ်သုံး သန္ဓေတား ဆေးတစ်လုံးထက် ငါးဆပါဝင်ကာ၊ ထိုဆေးသည် သန္ဓေတားဆီးမှုကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ အရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးတွေကို တစ်လကို နှစ်ကြိမ်ထက် ပိုမသုံးသင့်ဘူး။ ခဏခဏ ဆေးသုံးနေရင် ဆေးကယဉ်သွားပြီး ကိုယ်ဝန်ရနိုင်တယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ခဏအကြာ ပျို့အန်မယ်ဆိုရင်လည်း သွေးထဲကိုဆေးမရောက်တဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ရှိသွားနိုင်တာပဲ။ ဒီဆေးတွေက ကိုယ်ဝန်မရှိအောင် ၁၀ဝ ရာခိုင်နှုန်းပြည့် မကာကွယ်နိုင်ဘူး။ ဆေးတွေကို အခုနောက်ပိုင်း ငါးနှစ်အတွင်းမှာ တော်တော်လေးသုံးလာကြတယ်။ ဆေးသုံးစွဲနေတဲ့ ၂၀ဝန်းကျင် ကောင်မလေး တွေက နောင် ၁၀နှစ် ၁၅နှစ်လောက်မှာ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာတို့၊ သားအိမ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးသောက်ပြီးတဲ့ လတ်တလောအချိန်မှာတော့ သွေးတွေ အရမ်းဆင်းမယ်၊ ဓမ္မတာလာချိန်မမှန်ဘဲ နောက်ကျမှလာတာတို့၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဖျားနာတာတွေကိုတော့ ချက်ချင်းခံစားရမယ်” ဟု ဒေါက်တာမီမီကိုက ပြောသည်။
ယင်းဆေးများကို လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ခန့် လောက်ကတည်းက တင်သွင်းခွင့်ပြုထားကြောင်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲ လိင်မှုဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများကို ခံစားရသော အမျိုးသမီးများအား ကိုယ်ဝန်မရရှိရန် အရေးပေါ်တားဆေးအဖြစ် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့်အညီ မြန်မာအမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးရှိစွာ နေထိုင်သူများဖြစ်၍ ထိုအရေးပေါ် သန္ဓေတားဆေးများကို တစ်လွဲအသုံးမပြုသင့်ကြောင်း ဒေါက်တာမီမီကိုက ဆက်လက် ပြောပြသည်။